The availability of external funding to Indigenous providers of education has become increasingly unstable in Myanmar. What does this mean for the education rights of Indigenous children. (See Burmese language below)
While the EU’s strategy is commendable, other development partners seems to haveamore fickle and short-term strategy driving their support for indigenous education systems. At best the funding cuts demonstratesanaïve view of governance regimes and conflict dynamics within the country. At worst they demonstratesawilful intention to undermine indigenous service provision and to compromise indigenous children’s education rights.
The author is an independent education expert that has supported the work of indigenous providers of education for over ten years
တိုင်း ပြည် ရဲ့ ရှုပ် ထွေး ပြီး သမိုင်းနဲ့ ချီ ရှည် ကြာလှ တဲ့ ပဋိ ပက္ခ တွေ ကြောင့် မြန်မာ ပြည် ရဲ့ ပညာရေး ကဏ္ဍ ဟာ ကွဲပြား ခြားနား မှု မြင့်မား ပြီး ကြီးကြီး မား မား ကျဆင်း နေ ပါတယ်။ ယခု အ ချိန် မတိုင် ခင် အထိ ၊ နှစ် ပေါင်းများစွာ ပညာ ရေး အသုံးစားရိတ် လျှော့ နဲ ပြီး ဗဟို ချုပ် ကိုင် မှု မြင့်မားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခု နှစ် မတိုင် ခင် ထိ ပညာ ရေး ၀န် ကြီး ဌာ န ဟာ မြန် မာ ဘာ သာ စကား တမျိုး ထဲ ကိုသာ အသုံး ပြု သင် ကြား ခဲ့ တဲ့ အပြင်၊ တိုင်း ရင်း သား ဘာ သာ စကား တွေ နဲ့ သင်ကြား တာ ကိုလဲ ပိတ် ပင် ခဲ့ ပြီး ၊ တိုင်း ရင်းသား ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ရေခံ မြေ ခံ တွေ ကို ထင် ဟပ် မှု မရှိ တဲ့ စံ သင်ရိုး ညွန်းတန်း ကိုသာ အ သုံး ပြု ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် မြန်မာ အစိုး ရရဲ့ ပညာ ရေး ကို တိုင်း ရင်း သား လူမျိုး စု တွေ က ဗမာ မဟုတ် တဲ့ လူ မျိုးတွေ ကို ၀ါး မြို
ဘို့ အသုံး ပြုတဲ့ ကိရိယာ အဖြစ် မြင် တဲ့ အပြင် ပဋိ ပက္ခ ဖြစ် စေတဲ့ သော့ ချက် တခု အဖြစ် လဲ နှစ် ပေါင်း များ စွာ မြင် ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီ အ ခြေ အ နေ ဟာ ထူး ခြား တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလှု ရှင် တွေ က မြန်မာ အစိုး ရ နဲ့ တိုး ပြီး ပုံမှန် ဆက် ဆံ ရေး ထူထောင် ကာ ပညာ ရေး ၀န်ကြီးဌာ န ဘက် မျက် နှာ လှည့် သွား တာ နဲ့ တပြိုင် နက် တိုင်း ရင်းသား တွေ အတွက် ပညာ ရေး ရံပုံ ငွေ ကတော့ တိုး ပြီး မတည် မငြိမ် ဖြစ်လာ ပါတော့တယ်။ ဥရော ပ သမဂ္ဂ ရဲ့ ရည် ရွယ် ချက် က တော့ အကဲဆတ် တဲ့ ပဋိ ပက္ခ
နဲ့ မြန် မာ ပြည် ရဲ့ ပညာ ရေးအေ ပါ် ထောက် ပံ့ မှု ညီ မျှ စေဘို့၂၀၁၉ ခုနှစ် မှာ ပညာ ရေး ၀န် ကြီးဌာ န ကို ယူ ရို ငွေ သန်း ၂၀၀ ထောက် ပံ့ တာ နဲ့ အတူ၊ ကျေးလက် ဒေ သ တိုင်း ရင်းသား ပညာ ရေး ကွန် ယက် ၁၁ ခု ကိုလဲ ယူ ရို ငွေ သန်း ၂၀ တိုး မြုင့် ထောက် ပံ့ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ ဟာ ဥရော ပ သမဂ္ဂ ရဲ့ ခံယူ ချက် ဖြစ် တဲ့ လူသား ဆန် တဲ့ အကူ အညီ နဲ့ဖွံ့ ဖြိုး မှု အတွဲ အစပ် ကို အကောင် အထည် ဖေါ် ဖို့ဆိုတဲ့ အချက် နဲ့ ကိုက် ညီမှု လဲ ရှိ ပါတယ်။ အဲဒီ ထောက် ပံ့ မှု ဟာ ဒေသ တွင်း စွမ်း ရည် မြင့် တက် စေ မှုကို ကောင်းစွာ အလေးထား တဲ့ အပြင် တိုင်း ရင်း သား တွေ အ ပေါ် ထောက်ပံ့ မှုကိုလည်း ဆက်လက် ထိန်း သိမ်း ထား ပြီး ပဋိ ပ က္ခ က နေ နာလံ ထ လာ တဲ့ တိုင်း ပြည် အတွင်း မှာ အားလုံး ပါဝင် နိုင်တဲ့ အုပ် ချုပ် မှု ပုံစံကို တိုး မြှင့် လုပ် ဆောင်
ဘို့တောင်းဆိုလိုက် တာလဲ ဖြစ် ပါတယ်။